Muxuu yahay qorshaha Arsenal ay ka leedahay Alexandre Lacazette, xilli mustaqbalkiisa uusan hubanti ahayn? – Gool FM
Kooxda AC Milan oo soo bandhigtay Maaliyadda ay xiran doonto marka ay gurigeeda ku ciyaarayso xilli ciyaareedka cusub ee 2021/22… + SAWIRRO
Thiago Silva oo rajaynaya inay Champions League isku wajihi doonaan Kooxda AC Milan
RASMI: Andrés Iniesta oo heshiiska u kordhiyey Kooxdiisa Vissel Kobe, xilli maanta ay beegan tahay dhalashadiisa
Sidee ayay u muuqanaysaa SHAXDA ay Kooxda Arsenal ku soo geli doonto kulanka London Derby ee ay wajahayaan Chelsea?
Goolhaye Alisson Becker iyo Xaaskiisa oo shaaciyey inuu u dhashay cunugoodii saddexaad, xilli Chamberlain uu ku dhawaaqay…
Sidee ayay u muuqanaysaa SHAXDA ay Kooxda Chelsea ku soo geli doonto kulanka London Derby ee ay la leeyihiin Arsenal?
RASMI: Fulham oo ka laabatay horyaalka Premier League… (Waxa ay ku biirtay labadii kooxood ee hore u xaqiijiyey)
Horudhac: Manchester United vs Leicester City… (Red Devils oo markale dib u dhigi karta ku guuleysiga Premier League ee Man City)
Horudhac: Levante vs Barcelona… (Kooxda Koeman oo doonaysa inay si ku meel gaar ah ula wareegto caawa hoggaanka horyaalka La Liga)
Tababare Ronald Koeman oo si RASMI ah u shaaciyey liiska 23-ka ciyaaryahan ee Barcelona oo uu kala qeyb galayo kulanka Levante
Muxuu yahay qorshaha Arsenal ay ka leedahay Alexandre Lacazette, xilli mustaqbalkiisa uusan hubanti ahayn?
Haaruun June 13, 2020
(London) 13 Juun 2020. Kooxda Arsenal ayaa lagu soo warramayaa inay toddobaadyada soo aaddan weeraryahankeeda Alexandre Lacazette kala hadli doonto mustaqbalkiisa, iyadoo uu xiiso badan ka helayo Naadiga Atletico Madrid ee dalka Spain.
29-sano jirkaan ayaa doonaya inuu helo hubanti ah inuu sii joogi doono kooxda Arsenal, taasoo wajaheysa culeys badan oo ku qotoma shakiga hareeyay mustaqbalka Pierre-Emerick Aubameyang.
Majaladda ESPN ayaa warrineysa in Gunners aysan dooneyn inay lumiyaan labadeeda laacib ee weerarka sida wada jirka ah uga ciyaara, sidaas darteed waxay dardar galinayaan wadahadallo heshiiska loogu kordhinayo laacibkii hore ee Kooxda Lyon.
Heshiisyada labada weeraryahan ee Gunners ay ku joogaan Waqooyiga London waxaa ka harsan hal illaa labo sano, iyadoo Aubameyang qandaraaskiisu uu dhacayo xagaaga 2021-ka, halka Lacazette isna heshiiskiisu uu ku eg yahay sanadka 2022-ka.
Majaladda Isbaanishka ah ee AS ayaa horraan daabacday in Atletico Madrid ay xiiseyneyso saxiixa weeraryahanka Faransiiska ah, iyadoo adeegsaneysa xiddiga ay dhalasho wadaagga yihiin ee Thomas Lemar.
Arsenal ayaa laacibkan bartilmaameed ka dhiganeysay xilligii uu ku sugnaa kooxda AS Monaco, hase ahaatee, xagaagii 2018 ayaa heshiiskiisa lagu garaacay kaddib markii uu doortay ku biirista kooxda ka ciyaarta La Liga.
Si kastaba ha ahaatee, kooxda ku ciyaarta garoonka Emirates Stadium ayaa ka feejigan inay lumiso labadeeda weeraryahan, waxaana hadda ay durba diyaarineysaa wada hadallo ay heshiiska ugu kordhineyso Alexandre Lacazette si ay u xaqiijiyaan inuu waqti badan la sii joogo kooxda uu hoggaamiyo Macallin Mikel Arteta.
Liverpool oo 110 milyan oo gini ku qarash-gareynaysa labo xiddig oo ka tirsan kooxda Wolverhampton Wanderers
Kooxda Liverpool oo qarka u saaran inay Manchester United ku garaacdo saxiixa Jadon Sancho